फेसबुक बहस : दसैँलाई दशा हुन नदिन के गर्नुपर्ला ? - विवेचना
फेसबुक बहस : दसैँलाई दशा हुन नदिन के गर्नुपर्ला ?
September 13, 2017 396 Views
दसैँ के हो र दसैँ कसरी मनाउनु पर्छ भन्ने कुरा जान्न र बुझ्न आवश्यक छ । दसैँ हिन्दुहरुको महान् पर्व हो । यस पर्वमा देश विदेशमा रहेका आफन्तहरु भेला हुने र आफूभन्दा ठूलाबडाका हातबाट टीका जमरा र आशीर्वाद लिने प्रचलन रहिआएको छ । पहिला-पहिला वर्षमा एक जोर नयाँ लुगा लगाउने चलन थियो । साथै, कतिपय ठाउँमा त कहिले दसैँ आउँछ र चामलको भात खान पाइन्छ भनेर बस्ने अवस्था थियो । यी कुराहरु लेखिरहँदा सायद हुने खानेहरुलाई पत्याउन गाह्रो नै पर्ला । त्यसैले अहिले कुनै पनि चाड किन नहोस् हुनेखानेकै कारणले गर्दा भड्किलो बन्दै गइरहेको छ । दसैँलाई दशा नबनाउनको लागि आफ्नो क्षमताअनुसार खर्च गरौँ । अरुलाई देखाउनको लागि भनेर महँगा गरगहना र लुगा फाटा खरिद नगरौँ । साथै, चाडपर्वका नाममा मदिरा सेवन गरी समाज र घरपरिवारलाई दु:ख नदिऔँ । चाडपर्वका नाममा विकृति रोक्नका लागि आफू स्वयम् सजग रहनु नै बुद्धिमानी हुन्छ । अन्त्यमा, हुनेखानेहरुले मदिरा र तासमा खर्च गर्ने रकम गरिब दु:खीलाई दिएर सहयोग गर्नुहोला । जसको कारण एक दिन भए पनि गरिबको मुहारमा खुसी छाओस् ।
दसैँको शुभकामना सबैलाई । आफ्नु हैसियतले सक्ने मात्र खर्च गर्नु पर्छ । बहुमूल्य वस्तुलाई जथाभावी राख्नु हुँदैन । शरीरले नपचाउने खाना नखाने । अरुले जे र्गयो, त्यो गर्छु भनेर नसोच्ने । आफ्नु परिवारको सबैलाई खुशी बनाउने काम गर्नु पर्छ । धेरै पैसा बोकेर हिँड्नु हुन्न । जुवा तास नखेल्ने । धेरै मादक पदार्थ नखाने । यसरी दसैं मनाउन सकिन्छ । दसैं लाई दसा बनाउने भनेको नकारात्मक कुरा दिमागमा राख्ने गर्दा हो । दिमागलाई एकदम सकारात्मक राख्नुपर्छ ।
दसैँ भनेको परापूर्वकालदेखि नै चल्दै आएको चाड हो । यस अर्थमा भन्नुपर्दा दसैँ एक पारिवारिक जमघट गर्ने मात्र नभई खुसी बाँड्ने पर्वको रुपमा नि लिने गरिन्छ । हाम्रो चाड दसैँतिहार लगायतका पर्वहरुमा अनावश्यक खर्च गर्नु नराम्रो प्रवृत्ति हो । अर्काको देखासेखी गरेर त्यस्तै दसैँतिहार मनाउने र अन्तिममा धोती न टोपी हुने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यसैले जति सक्दो कम खर्च गरेर चाडपर्व मनाउन समस्त नेपालीलाई अनुरोध गर्दछु । दसैँ दशाको रुपमा होइन खुसियालीको रुपमा मनाउनु होला ।
सर्वप्रथम सबैलाई आउँदै गरेको बडादसैँको शुभकामना । हामीले दसैँमा फजुल खर्च गर्नुहुँदैन । आफूले सक्ने मात्र खर्च गर्नुपर्छ । अरुले त त्यस्तो पो र्गयो, म पनि त्यसको भन्दा राम्रो गर्छु भनेर प्रतिस्पर्धामा लाग्नुहुँदैन । यसबाट आफूलाई नै बेफाइदा हुन्छ । त्यसैगरी यो त रमाइलोको चाड हो भनी जुवातास पनि खेल्नु हुँदैन । यसबाट आफूले दसैँमा खर्च गर्न भनि राखिएको पैसा पनि सकिन्छ र दसैँ नै खल्लो हुन्छ । बल्ल बल्ल वर्ष दिनमा आएको महान चाडलाई हामी आफैँ किन खल्लो बनाउने ? त्यसैले फजुल खर्च र जुवा तास जस्तो नकारात्मक काम नगरेर दसैँलाई दसा हुन दिनुहुँदैन ।
सर्वप्रथम बजारमा हुने चापलाई ध्यानमा राखी प्रशासनले बजार क्षेत्रमा अत्यधिक मात्रामा प्रहरी सुरक्षा खटाउनु पर्छ र अहिले बिर्तामोड बजारमा हुने मोटरसाइकल चोरीको घटना बढिरहेको छ त्यसलाई पनि प्रशासनले न्यूनीकरण गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
नेपालीको महान् चाडमध्येको एक प्रमुख चाड दसैँ हो । परापूर्वक कालदेखि मान्दै आएको यो चाडले नेपाली समाजमा आफ्नो छुट्टै अस्तित्व राख्न सफल भएको छ । विशेष गरेर आफूभन्दा ठूलाबाट आशीर्वाद लिने र सबै परिवार खुसी भएर यो चाड मनाउने चलन हाम्रो समाजमा रहेको पाइन्छ । चाड पर्वलाई हौसलासहित मान्ने र मीठा मीठा खानेकुरा खाने, नयाँ-नयाँ सामान किन्ने, सबैले यसैगरी मनाउने गरेको पाइछ । तर, अहिले आएर चाडपर्व आउँदा हामीमा ‘दशा’ आएको जस्तो हुन थालेको छ । यो दसो हामीले आफैँले नि निम्त्याएको हो भन्नुमा दुईमत नहोला ! किनकि नेपाली समाजमा चाडपर्व मनाउँदा आफ्नो क्षमताभन्दा बढी नै खर्च गरेर चाडपर्व मनाउने चलन भित्रिएको छ । धेरै महँगो महँगो सामान खरिद गर्ने, जाँड रक्सी खाने, होहल्ला गर्ने, झँैझगडा गर्ने, जे पायो त्यही बोल्ने, अर्काको देखासेखी गर्ने यस्ता कार्य गरी मनाएको चाड पनि दसैँ हो र ? चाडपर्व भरी अत्यधिक खर्च गर्ने र चाड सकिएको भोलिपल्ट ऋणले टुपी डुब्ने गरी मनाएको चाड नि चाड हो र ? त्यसैले आफ्नु क्षमता कस्तो छ, धेरै खर्च गर्दा मात्र चाडपर्व मनाएको हुँदैन भन्ने सोचबिचार बेलैमा पुग्योे भने चाडपर्व साँच्चिकै अविस्मरणीय तरिकाले मनाएको हुनेछ ।
दसँै नेपालीको महान चाड हो । दसैँको आगमनसँगै गाउँघर र सहरतिर खुसीको माहोल छाउँछ । अरुको देखासिखी गरी उनीहरुकै जस्तो नक्कल गर्दै चाडपर्व मनाउनु पर्छ भन्ने पनि त छैन । महँगा महँगा कपडा लगाउँदैमा, राम्रो खाँदैमा मात्र दसैँ मानिने पनि त होइन । घाँटी हेरी हाड निल्नु भने झैँ मेरो विचारमा आ-आफ्नो गच्छे र क्षमताअनुसार चाडपर्व मनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ । सहरबजारतिर मानिसको अलि बढी चाप पर्ने हुनाले सम्भावित दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ, चोरी लुटपाट हुन सक्छ । कुनै अप्रिय घटना हुन सक्छ । त्यसैले आफै सचेत हुनु जरुरी छ । दसैँजस्तो महान चाडलाई दशा नबनाऔँ ।
महान् पर्व दसैँको सबैमा शुभकामना । दसँै आफैँमा दशा हुँदैन । मानिसले नै गर्ने नकारात्मक क्रियाकलापका कारणले गर्दा दसैँ दशाको रुपमा परिवर्तन भएको हो । दशाबाट मुक्त हुन हरेक मानिसले आफ्नो घाँटी हेरी हाड निल्ने बानीको विकास गर्नुपर्दछ । अत्यधिक खर्च नगर्ने आदि जस्ता कार्य गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
सर्वप्रथम दसँैलाई दशाको रुप दिनु भएन । पोहोर सालको जस्तै गरी दसैँ गाउँ-सहरमा भित्रन लागेको छ । चहलपहल बढ्न थालेको छ सहरबजारमा । दसैँ सँगसँगै विकृति फैलिएको छ । यही बेला विभिन्न आपराधिक घटना बढेको पाइन्छ । चोरी गर्ने, मदिरा खाएर होहल्ला गर्ने, दुर्घटना गराउने, मान्छे अनुशासनहिन बन्न पुगेका छन् । मिलमिलाप सद्भावको पर्व भए ता पनि समाजमा बसेर जुवातास खेल्ने, मनपरी गर्ने बढी मात्रामा रवाफ देखाउने गर्छन् । यसले गर्दा आपसी सम्बन्ध झनै बिग्रन्छ । कतिको घरबार नै टुट्छ । दसैँ मेलमिलाप सद्भाव र आत्मीयताको पर्व हो । छरछिमेक, नातागोताहरुसँग सम्बन्ध मजबुत बनाउने पर्व हो । वर्षभरिको दु:ख बिर्सेर रमाउने हाँस्ने हो । जसले गर्दा आपसी सम्बन्ध अझै प्रगाढ बनेर जाओस् । त्यसकारण घरपरिवारको खुसी लागि सोचेर अनुशासनमा बस्ने, मदिराजन्य पदार्थको सेवन नगर्ने, जुवातास खेलेर समाजमा विकृति फैलिन नदिने । आफ्नो आर्थिकस्थिति हेरेर दसैँ मनाउने गर्नुपर्छ र अनावश्यक फजुल खर्च गर्नु हुँदैन । पछि आउने जोखिमबाट बच्न सकिन्छ ।
दसँै हिन्दुहरुको महान चाड । यो समयमा दशा धेरै हुने गरेको छ । विकृति पनि धेरै बढ्दो देखिन्छ । दसैँमा जुवातास नै खेल्नु पर्छ भन्ने छैन । पिङ खेली चङ्गा उडाएर पनि रमाइलो गर्न सकिन्छ । दसैका बेला यात्रा गर्दा भरिसके मादकपदार्थ सेवन गरेर गर्नु हुँदै न । चहलपहल भिडभाडमा दुर्घटना हुन्छ । भरिसक्के मोटरसाइकल जस्ता सवारीमा यात्रा गर्दा क्षमता अनुसार नै चढ्ने गर्नुपर्छ । सरकारले यात्राका लागि सुविधा हुने र भिडभाड नहुने गरी सवारीसाधनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । दसैँमा मादकपदार्थ सेवन गरेर मात्रै मनाइँदैन, आपसी भेटघाट पनि दसै नि हो भन्ने ज्ञान हुनुपर्छ । सबैले यस्ता कुरामा ध्यान दिए पक्कै पनि दसैँ दशा हँुदैन ।
Previous शिक्षक नहुँदा पल्टिएन गणित विज्ञानको पाना
Next सडक सञ्जाल विस्तार भएपश्चात् मुहार फेर्दै श्रीअन्तु